Torohevitra 4 hamoronana paikady fivarotana horonantsary mahomby amin'ny orinasanao | Martech Zone
Torohevitra 4 hamoronana paikady fivarotana horonantsary mahomby amin'ny orinasanao
Zoma, Oktobra 30, 2020 Zoma, Oktobra 30, 2020 Jeff Galea
Tsy takona afenina fa mirongatra ny fampiasana horonantsary amin'ny marketing amin'ny atiny. Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny horonantsary an-tserasera dia voaporofo ho endrika atiny manintona indrindra sy mahasarika indrindra ho an'ireo mpampiasa. Nanjary iray amin'ireo sehatra mahomby indrindra amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary ny media sosialy, ary zava-misy izany mba tsy hamaivanina. Izahay dia manana torohevitra tena ilaina ho anao momba ny fomba famokarana horonantsary mahomby izay misarika ny sain'ny mpihaino ka handray andraikitra izy ireo amin'ny farany.
1. Mamorona horonan-tsary hiteraka mitarika
Tsy toa anao, ny mety ho mpanjifanao dia tsy mieritreritra momba ny vokatra na serivisy tontolo andro toa anao. Fa kosa, manana ny tombotsoany sy ny fandaharam-potoanany izy ireo. Raha te hampijanona ny mpanjifa mety ho tsikaritrao dia mila ataonao mifamatotra amin'izy ireo ny atiny.
Tia sy mahatadidy tantara ny olona. Ny tantara tsara dia misy fifandonana mazava sy vahaolana mamaly. Raha azonao atao ny manamboatra ny orinasanao amin'ny alàlan'ny tantara iray izay misy olana ara-dalàna sy vahaolana mahomby, dia mety hihaino ny hafatrao manontolo ny olona ary hahatadidy izay hatolotrao.
2. Araraoty ny horonan-tsarinao ary miorena tsara amin'ny Youtube
Tsy ampy ny mampakatra horonantsary. Raha te hanana fomba fijery misimisy kokoa sy hiteraka valiny dia mila milaza amin'ny Youtube momba ny momba ny horonantsarinao ianao ary iza amin'ireo mpihaino kendrena no liana amin'izany. Ny fanatsarana ny horonan-tsary dia manome anao fotoana ahazoana milahatra ny horonan-tsarinao sy ny atiny ho hitan'ny olona marina. Ka raha te hanana fomba fijery, mpamandrika ary fifamoivoizana bebe kokoa avy amin'ny Youtube ianao dia araho ireto torohevitra kely ireto:
Fantaro ny teny lakile nataonao ary alao antoka fa manatsara ny atiny Youtube ho anao ianao.
Manorata lohateny fohy, mahaliana ary mahaliana izay mamaritra ny momba ilay horonan-tsarinao. Ny lohateny dia tokony ahitana ny teny fanalahidy kendrenao.
Manorata famaritana amin'ny antsipiriany izay milaza amin'ny mpijery anao ny antony maha-zava-dehibe ny hijerena ny horonantsarinao ary alao antoka fa ao anatin'izany ny teny lakileo. Mariho fa ny andalana 3 voalohany ihany no hita ao amin'ny Youtube raha tsy manindry ny Asehoy bebe kokoa rohy, ka izay rohy sy antso ho amin'ny hetsika dia tokony hapetraka eo an-tampony.
Manampia marika mifandraika sy fanasokajiana. Manampy an'i Youtube hampiseho ny horonantsarinao toy ny horonantsary soso-kevitra ity raha mijery horonantsary mitovy amin'izany ireo mpampiasa.
Manampia thumbnail manokana ho an'ny horonantsary izay mifanaraka amin'ny marikao mba hahafantaran'ny mpihaino anao mamantatra ny horonan-tsarinao mora foana.
Ampidiro dikanteny sy dikanteny mihidy. Hanatsara ny Youtube SEO anao izany ary ho mora kokoa ho an'ny mpijery ny mijery amin'ny tontolo mitabataba na tsy misy feo.
Amporisiho ny fanehoan-kevitra, hevitra ary fanontaniana. Izany dia hanome ny fahefan'ny fantsonao ary hanampy anao hanangana vondron'olona.
Ampio ny Screens an'ny teratany Youtube ao amin'ny faran'ny horonan-tsary. Ireo dia hanampy anao hampiroborobo ny atiny, ny fantsonao, ary na dia ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao aza.
3. Miteraha fahatsiarovan-tena ary mitondra fiara fifamoivoizana
Ny Video Teasers dia natao hisarika ny sain'ny mpijery sy hanentana ny fahalianana hahafanta-javatra. Ireo mahomby dia manome ny tsiro fotsiny ny zavatra ho avy ka maniry ny hahazo vaovao bebe kokoa ny olona. Amin'izao fotoana izao, ny haino aman-jery sosialy dia manolotra fomba haingana sy haingana hahazoana vaovao marobe momba ny vokatrao na serivisinao ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fizarana teaser video dia fomba iray mahomby hisarihana ny sain'ny mpihaino kendrenao ary asao izy ireo hitsidika ny tranonkalanao hahazoana horonantsary sy fampahalalana lalindalina kokoa. Izany dia hanampy anao hampianatra ny vinavinanao, hiteraka fitarihana mahay kokoa ary hampitombo ny taham-pikatsoanao.
4. Fatra sy fifehezana
Ankehitriny rehefa nandefa ny horonan-tsarinao ianao dia mila mandrefy tsara sy marina ny fahombiazan'ny atiny horonantsary. Ary na eo aza ny fahitana ny horonantsary no jeren'ny ankamaroan'ny mpivarotra voalohany, dia tsy ny fomba tsara indrindra handrefesana ny fahombiazan'ny horonantsarinao no jerena.
Tanjona daholo ny tanjonao!
Ny fametrahana tanjona video no tokony ho dingana voalohany hataonao. Ity dia hanome anao ny torolàlana takiana mba hifantohana amin'ny angona ilainao fotsiny ary hialana amin'ny fandanianao fotoana amin'ny fampahalalana tsy misy dikany. Inona no antenainao hahatongavana? Inona no tanjonao voalohany amin'ny marketing? Te hanana fahatsiarovan-tena ve ianao, manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, na manentana ny hetsika?
Miorina amin'izany, azonao atao ny mamantatra hoe iza ny refy ampiharina amin'ny tanjona tsirairay.
Andao hojerentsika hoe iza avy ireo metrika azonao ampiasaina ho anao tanjona:
Lalao totalika - Ity no metrika tsotra indrindra nefa mamitaka indrindra. Ny tantara an-tsehatra dia mampiseho aminao ny isan'ireo olona tsindry ny bokotra an-tsehatra amin'ny horonantsarinao na firy na firy taona izy ireo no nijery ilay horonantsary. Na dia mety tsara aza ny fandrefesana ity metric ity dia tsy azonao atao ny mamaritra hoe mandaitra sy mahataona ny horonan-tsarinao.
Lalao Rate - Play Rate dia ny isan-jaton'ny mpitsidika pejy izay nanindry ny bokotra play ary nanomboka nijery ny horonan-tsarinao. Ny tahan'ny filalaovana dia isaina amin'ny alàlan'ny fakana ny isan'ny kilalao ary zarao amin'ny isan'ny enta-mavesatra horonantsary. Hanampy anao hamantatra raha tafiditra anaty toerana mety ilay horonan-tsary ary manintona ny hakanton'ny sary tianao. Raha mahazo tahan'ny filalaovana ambany ianao dia azonao atao ny mieritreritra ny mametraka ny horonan-tsarinao amin'ny toerana malaza kokoa, manao izay hahalehibe ny horonan-tsary natsofoka, ary manana sary kely mahasarika kokoa.
Taham-pifandraisana - Ny fifamofoana dia mampiseho aminao hoe ohatrinona ny mpijery horonantsarinao nojerena, ary aseho ho toy ny isan-jato. Ity no mari-pamantarana lehibe milaza aminao ny maha-zava-dehibe sy mahaliana ny horonan-tsarinao amin'ny mpijery anao ary afaka manampy anao hamantatra amin'izay fotoana izay ny mpijery anao manomboka tsy liana firy sy ireo faritra nesorina. Ity dia hanampy anao hametraka ny bokotra miantso ny hetsika sy ireo singa mifandraika hafa amin'ny paikady stratejika kokoa mandritra ilay horonan-tsary.
Fizarana ara-tsosialy - Ny fizarana ara-tsosialy dia mampiseho ny fomba fizarana ny atiny video amin'ny fantsona media sosialy. Ny fizarana atiny dia mitarika fijerena horonantsary misimisy kokoa, mahatratra mpihaino vaovao, ary afaka manampy anao hamaritra ny fientanentanan'ny mpihaino anao momba ny atiny sy ny marikao.
Taham-panovana - Ny fiovam-po dia isan'ny hetsika natao nandritra na taorian'ny fijerena horonantsary. Ireo dia mety ho ny CTA ary ny fanamarihana voatsindry, mitarika namboarina, sns. Ity metrika ity dia somary sarotra ihany ny manara-dia, ary mety mila mpilalao video natokana toa an'i Wistia, Vidyard na Sprout Video ianao ho an'ny famakiana antsipiriany bebe kokoa ny hetsika. Ny tahan'ny fiovam-po dia metrika tena ilaina ampiasaina hanampiana handrefesana ny ROI ateraky ny horonan-tsarinao.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny video manampy amin'ny fanombohana ny ezaka marketing anao?
Mifandraisa aminay izao raha mila hevitra momba ny Marketing amin'ny horonan-tsary maimaim-poana.
tsidiho ny Channel Youtube anay raha mila torohevitra fanampiny momba ny horonan-tsary, izay azo antoka fa hampiroborobo ny fampielezan-kevitrao.
Tags: haino aman-jery4room4mediafanentanana amin'ny horonantsaryVideo conversionfandraisana an-tsaryteny lakile videovideo marketingvideo marketing strategymetatra videofanatsarana horonan-tsarytahan'ny filalaovana horonantsarymilalao videofizarana horonan-tsarypaikadin'ny youtube
Jeff Galea dia nanangana ny Room4 Media miaraka amina iraka hanampiana ireo orinasa manerana an'izao tontolo izao hifandray sy hifandray amin'ny fomba mandaitra kokoa amin'ny mpihaino azy amin'ny alàlan'ny marketing video.
Fahaiza-manao Teknolojia 5 Mpivarotra dizitaly rahampitso no mila mahay anio
3 Novambra 2020 à 3:34
May 14, 2021 amin'ny 7: 24 AM
Misaotra nizara ny toro-hevitra. Mampiasa izany aho mba hahatakaran'ny hafa.